Tamparuli +Ju Ju Cabin enembono yentaba - I-Airbnb
Tamparuli +Ju Ju Cabin enembono yentaba
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguDaniel
Ukuba uyayithanda indalo kwaye uyonwabele inkululeko yokuhlola ngokuzimeleyo, +JuJu Cabin likhaya lakho eligqibeleleyo kude nekhaya. Ukuhamba kwale ndlu yasemaphandleni idibanisa zonke izinto zendalo ngokuhambelanayo, enegumbi lokulala eliphezulu elineembono zentlambo yaseKiulu, igumbi lokuhlala eliphefumlelweyo lobuhlanga, ikhitshi elisisiseko elivulekileyo / lokutyela elilungele ukuzityisa kunye ne-bbq encinci. ntywila kwindawo ekungqongileyo kwaye ugcobe iimbono ezintle ze-mounta.in. Uxolo - ngokungqongqo akukho bantwana. Umnqantsa kakhulu 1min uhamba usuka kwindawo yokupaka izitalato
Indawo ejikelezileyo iphezulu kakhulu, ayifanelekanga abantwana okanye iindwendwe ezinobunzima bokuhamba.
Kukho umnqantsa wendlela yabucala eya kwikhabhini ekufikeleleka kuyo nge- four-wheel-drive okanye isithuthi esifanayo. Kwiimoto ezincinci, indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato iyafumaneka, iindwendwe zingakhetha ukunyuka induli ukusuka kwindawo yokupaka ecaleni kwendlela ethatha malunga nemizuzu emi-2.
Kukho izinyuko ezijikelezayo ezikhokelela ukusuka kwigumbi lokuhlala elingaphakathi ukuya kwigumbi eliphezulu elinebhedi ephindwe kabini yomntu ongatshatanga okanye isibini. Ngaphakathi kwigumbi eliphezulu kukho ifeni emileyo kunye nenethi yeengcongconi phezu kwebhedi.
Kwikhitshi evulekileyo, kukho i-gas cook top top, ngaphakathi kwi-pantry kukho i-oven ye-toaster yombane, i-stove top kettle, i-dispenser yamanzi, izinto zokupheka, i-cutlery kunye ne-tableware kunye nefriji encinci.
Ngaphakathi kwigumbi lokuhlala, kukho indawo yokuhlala, iTV kunye nesidlali seDVD.
Ishawa kunye nendlu yangasese idibene negumbi lokuhlala kumgangatho ophantsi.
kukho i-bbq encinci enezixhobo ozisebenzisayo, nceda i-bo charcoal kunye neziqalo.
+JuJu Cabin ibekwe phezu kwenduli yepropathi yabucala, 100m ngaphantsi kwenduli yenye indlu yeendwendwe ekwalawulwa yiBorneo Orchard House.
+ IJuJu Cabin ikwincopho yenduli yepropathi yeehektare ezili-10 inegadi yeziqhamo ye-durian, izityalo zamapayina, indlu yeendwendwe kunye nendawo yokuhlala yabanini. Le ndawo yeyelali yaseKiwoi ekumgama oziikhilomitha ezi-2.5 kwaye indlela idibanisa iilali ezintathu iKiwoi, iLingga kunye neBambangan ecaleni kweenduli.
Indlela ebukekayo ixhaphakile ngabakhweli kunye nabakhweli beebhayisekile ezidlula kwipropathi ukuya kwilali yaseBambangan emva koko baye kwibhulorho eyenziwe ngamaplanga kumlambo i-Kiulu apho unokunqumla ukuya kwilali yaseMalangang, edume ngemisebenzi yokukhwela umlambo.
I-Tamparuli yeyona dolophu ikufutshane ne-6km ezantsi kwendlela ejikajikayo, idolophu yaziwa ngokubanzi ngebhulorho enkulu yokunqunyanyiswa i-Jambatan Tamparuli - kukho nengoma yasekhaya edumileyo malunga nebhulorho! I-Tamparuli ikwalikhaya lesitya somtyikityo sasekuhlaleni esiqhotsiweyo senoodle; I-Tuaran Mee kwaye ngokuqinisekileyo imarike entsha yeveki enemibala kakhulu ngooLwezithathu apho amafama avela kwisithili sonke adibana khona ukuze athengise imveliso yawo kwaye afumane iindaba zamva nje edolophini kwaye adibanise nabamelwane babo abakude.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho bubonke, umnakekeli wethu uya kudibana nawe ekufikeni kwakho ukuze akubonise malunga nepropathi yethu kunye nezixhobo ezikwikhabhathi yakho. Sihlala kufutshane kwaye sinokuqhagamshelwa ngokulula.